यो त्यहाँ हो जहाँ तपाईँंले सन्दर्भहरू वा सान्दर्भिक फाँटहरू हालको कागजातमा घुसाउनु भएको थियो. सन्दर्भहरू सान्दर्भिक फाँटहरू हुन् जुन उही कागजात वा मुख्य कागजातको सब-कागजातहरू बीचमा छ ।
एउटा फाँटको रूपमा एउटा अनयोन्य सन्दर्भ प्रविष्टी गर्दा तपाईँंले हुने फाईदा तपाईँंले हरेक पटक कागजात परिवर्तन गरिरहदाँ सन्दर्भहरूलाई म्यानुअल तरीकाले समायोजन गर्नुपर्ने हुँदैन। फाँटहरूलाई F9 बाट अद्यावधिक गर्नुहोस् र कागजातको सन्दर्भहरू पनि स्वत:तरीकाले अद्यावधिक हुन्छन।
रोज्नुहोस् घुसाउनुहोस् - फाँटहरू - अन्य - सन्दर्भहरूट्याब
उपलब्ध फिल्ड प्रकार सूचीबद्ध गर्दछ। तपाईंको कागजातमा फिल्ड थप्न, फिल्ड प्रकारमा क्लिक गर्नुहोस्, चयन सूचीमा फिल्ड क्लिक गर्नुहोस्, र त्यसपछि घुसाउनुहोस् क्लिक गर्नुहोस्।निम्न क्षेत्रहरू उपलब्ध छन्:
सन्दर्भ सेट गर्नुहोस्
सन्दर्भ फाँटका लागि लक्ष्य सेट गर्नुहोस्. नाम तल, सन्दर्भका लागि नाम प्रविष्ट गर्नुहोस्. जब सन्दर्भ घुसाइएको बेला, नाम पछि सूची बाकस चयनको पहिचायकको रूपमा उपस्थित हुन्छ.
HTML काजातमा, यस रूपमा प्रविष्ट भएको सन्दर्भ फाँटहरू उपेक्षित हुन्छ. HTML कागजातहरूको लक्ष्यका लागि, तपाईँंले पुस्तकचिनो घुसाउनु पर्दछ.
कागजात भित्र अन्य अवस्थामा एउटा सन्दर्भ घुसाउदा। पहिले अनुरूप पाठ अवस्थालाई "सन्दर्भ सेट गर्नुहोस्" सँग परिभाषित गर्नुपर्दछ। अन्यथा,छनोट अन्तर्गत एउटा फाँट नाम रोजेर एउटा सन्दर्भ घुसाउन असम्भव हुन्छ।
मुख्य कागजातहरूमा,तपाईँंले एउटा सहायक-कागजात बाट अन्यमा सन्दर्भ गर्न पनि सक्नुहुन्छ। याद गर्नुहोस् सन्दर्भनाम छनोट फाँटमा देखापर्ने छैन र "हात द्वारा" बाट प्रविष्टी गर्नु पर्दछ।
HTML काजातमा, यस रूपमा प्रविष्ट भएको सन्दर्भ फाँटहरू उपेक्षित हुन्छ. HTML कागजातहरूको लक्ष्यका लागि, तपाईँंले हाइपरलिङ्क घुसाउनु पर्दछ.
घुसाउनुहोस् - पुस्तकचिनो बाट एउटा पुस्तकचिनो कागजात भित्र घुसाए पछि,सन्दर्भहरू ट्याबमा भएको पुस्तकचिनो प्रविष्टी उपयोगी बन्दछ। पुस्तकचिनोहरू निश्चित पाठ परिच्छेदहरू कागजात भित्र चिनो गर्नलाई प्रयोग हुन्छन। पाठ कागजात भित्र, तपाईँंले पुस्तकचिनोहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ उदाहरणका लागि,कागजात भित्र एउटा परिच्छेद बाट अन्यमा फड्कनका लागि।
HTML कागजातमा, यो पुस्तकचिनोहरू एङ्कर हुन्छ <A name>, उदाहरणका लागि जुन हाइपरलिङ्कहरूको लक्ष्य निश्चित हुन्छ.
सन्दर्भहरू फाँटहरू हुन। एउटा सन्दर्भ हटाउनलाई,फाँट मेट्नुहोस्। यदि तपाईँंले एउटा लामो पाठलाई सन्दर्भको रूपमा प्रविष्टी गर्नुहुन्छ र सन्दर्भ मेटिसकेपछि यसलाई पुन: प्रविष्टी गर्न चाहनुहुन्न भने, पाठ चयन गर्नहोस् र यसलाई क्लिपबोर्डमा प्रतिलिपि गर्नुहोस्।तपाईँंले त्यसपछी यसलाई सम्पादन गर्नुहोस् - विशेष तरीकाले टाँस्नुहोस्आदेश प्रयोग गरेर उही अवस्थामा "ढाँचाबद्ध नगरिएको पाठ" रूपमा पुन: घुसाउन सक्नुहुन्छ। सन्दर्भ मेट्दा पाठ निस्क्रिय रहन्छ।
ढाँचा चयन गर्नुहोस् जुन तपाईँं चयन गरिएको सन्दर्भ फाँटका लागि प्रयोग गर्न चाहनुहुन्थ्यो. तलका ढाँचाहरू उपलब्ध छन्:
पृष्ठको सङ्ख्या घुसाउनुहोस् सन्दर्भ लक्ष्य समावेश गरि.
पूर्ण सन्दर्भ लक्ष्य पाठ घुसाउनुहोस्.
सन्दर्भ फाँट सँग सम्बन्धित सन्दर्भ लक्ष्यको स्थानमा निर्भर रहेर "above" वा "below" घुसाउछ।
पृष्ठ शैली जस्तो
पृष्ठ शैलीमा निर्दिष्ट गरिएको ढाँचा प्रयोग गरेर सन्दर्भ समाविष्ट पृष्ठको सङ्ख्या घुसाउछ।
अनुच्छेदको सङ्ख्या घुसाउनुहोस् सन्दर्भ लक्ष्य समावेश गरि.
कोटि र सङ्ख्या
वर्ग(क्याप्सन प्रकार) र सन्दर्भ लक्ष्यको सङ्ख्या घुसाउछ। यो विकल्प तपाईँंले सन्दर्भ गरेको एउटा वस्तुई एउटा क्यापसन संगभएमाा मात् उपलब्ध हुन्छ।र
सन्दर्भ लक्ष्यको क्याप्सन लेबुल घुसाउछ। यो विकल्प तपाईँंले एउटा वस्तु एउटा क्याप्सन सँग लक्ष्य सन्दर्भ गर्दा मात्र उपलब्ध हुन्छ।
सन्दर्भ लक्ष्यको क्याप्सन सङ्ख्या घुसाउछ। यो विकल्प तपाईँंले एउटा वस्तु एउटा क्याप्सन सँग लक्ष्य सन्दर्भ गर्दा मात्र उपलब्ध हुन्छ।
तपाईँले सिर्जना गर्न चाहनुभएको प्रयोगकर्ता-परिभाषित फाँटको नाम टाइप गर्नुहोस् । लक्ष्य सेट गर्न, "Set Reference" लाई टाइप सूचीमा क्लिक गर्नुहोस्, सो बाकसमा नाम टाइप गर्नुहोस्, र त्यसपछि घुसाउनुहोस् । नयाँ लक्ष्य सन्दर्भ गर्न, चयन सूचीमा लक्ष्य नाम क्लिक गर्नुहोस् ।
मुख्य कागजात भित्र, भिन्न सहायक-कागजातहरूमा भएका लक्ष्यहरू छनोट सूचीमा प्रदर्शन गरिन्छन। यदि तपाईँंले लक्ष्यमा एउटा सन्दर्भ घुसाउन चाहनुहुन्छ भने, तपाईँंले नाम बाकसमा बाटो र नाम टाइप गर्ने पर्दछ।
सामाग्रीहरू प्रविष्ट गराउनुहोस् जुन तपाईँं प्रयोगकर्ता-परिभाषित फाँटहरूका लागि थप गर्न चाहनु हुन्थ्यो.
यदि तपाईँंले कागजात भित्र पाठ चयन गर्नुहुन्छ भने, र त्यसपछी एउटा सन्दर्भ घुसाउनुहुन्छ भने,चयन गरिएको पाठ तपाईँंले घुसाए को फाँटको सामग्रीहरू बन्दछ।
Title is: सन्दर्भहरू